Home Wararka Puntland oo Midowga Yurub kala hadashay ka hortagga Kalluumaysiga sharci darrada
Kulanka ayaa waxaa uu ka dhacay dusha sare mid ka mida maraakiibta howlgalada Midowga Yurub. Mas’uuliyiin ka tirsan Dowlad Goboleedka Puntland ayaa kulan la qaatay ciidamadda ilaaladda Xeebaha puntland ee midowga yurub, waxaana kulanka qayb ka ahaa wasiiro iyo Saraakiil.
Kulanka ayaa waxaa uu ka dhacay dusha sare mid ka mida maraakiibta howlgalada Midowga yurub,waxaana sidoo akle mas’uuliyiinta ka qayb gashay ka mid ah Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo gadiidka badda puntland Senetor Mohamed Abdi Majiino iyo Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Qorshaynta Hor-umarinta dhaqaalaha iyo Xiriirka Caalamiga ahna Duqa Degmada Bossaso Abdiqani Ahmed Ismail (Deera-dile).
Mas’uuliyiinta ayaa si gaar ah waxaa ay kulan ula qaateen Taliyaha Ciidanka Ilaalada badda Puntland ee midowga Yurub, Admiral Alejandro Cuerda, iyagoo ka wada hadlay arrimo ku aaddan xoojinya iskaashiga Amniga xeebaha Puntland. Sidoo kale kulanka ayaa diiradda lagu saaray sida wararku sheegayaan, Xakamaynta Tahriibka joojinta Kallumaysiga sharci darada ah ilaalinta Hubka kasoo degaxeebaha Bossaso.